ဘဝမှတ်တိုင်: ✔Anti Theft Alarm v1.2.2 App For Andrid ✔
-မိမိဖုန်းလေးကို တခြားသူတစ်ယောက် ယောက်က လာကိုင်လိုက်ရင် Alarm ထမြည်ပြီး အချက်ပေးမယ့် application တစ်ခုပါ။ဖုန်းသူခိုးဖမ်းပေးတယ်ပေါ့ဗျာ-
-အသုံးပြုပုံကတော့ apk ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ၊မိမိဖုန်းပေါ်ကို install လုပ်၊
apk ထဲဖွင့်ဝင်၊ပြီးရင် သူ့ရဲ့ settings ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်သလောက် Delay to active alarm မှာ ထားမယ့် seconds ထားပြီး၊Activate alarm နေရာကို click နှိပ်ပေးပြီး back key နဲ့ ပြန်ထွက်လိုက်ရင် ရပါပြီ။တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ဖုန်းကို လာကိုင်ခဲ့ရင် Alarm ထမြည်နေပါလိမ်မယ်။
settings ထဲမှာ alarm ringtone ကို ပြောင်းလို့ရပြီး၊delay active alarm second ကိုလည်း လိုသလိုချိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး
volume contorl အတိုးအကျယ် limit ကိုလည်း ချိန်ညှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်-
-Apk File က 573KB လေးပဲရှိပြီးတော့
-Android OS Version 2.1 နဲ့ အထက်ရှိထားသော ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်း install လုပ်၍ အသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်-
♨အောက်က လင့်ခ် မှာဒေါင်းလုပ်ယူပါ♨
Now works well with screen off
Bug fixed on alarm screen
You can use your own sounds
Very useful if you haveacurious friend too! There is no way for your phone to be stolen or used without your permission.
You can also use this app to avoid your children to use your phone without you knowing. You can now leave your phone anywhere in your home with no worries.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/23/2014 11:22:00 pm